အောင်မြင်မှုအဖြစ်အပျက်များနှင့်အတူပြန်လည်ရယူခြင်း - သတင်း
ဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ exes တွေနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့တယ်၊
သင်သည်သင်၏ဟောင်းများအပေါ်တက်ဆွဲထားလျှင်သင်ကသူတို့ကိုသင်၏မိတ်ဆွေများကနေစကားကိုနားထောငျပါလိမ့်မယ်ဂန္အရာဖြစ်၏သူတို့ကိုစာပို့မထားပါနဲ့။ အချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းသင်သည်သင်၏ဟောင်းကိုသင်၏ခေါင်းထဲမှထုတ်ပစ်ရန်မထင်နိုင်ပါ။ သင်ဆက်လက်မေးနေသည်မှာ - ကျွန်ုပ်၏ယခင်ဟောင်းနှင့်မည်သို့ပြန်ရနိုင်မည်နည်း။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့သည်ငါ၏ Instagram ကိုပုံပြင်များကိုစောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်ကြသနည်း အဘယ်ကြောင့်ငါကလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာသူတို့ကိုနောက်ယောင်ခံကိုရပ်တန့်လို့မရပါဘူး သငျသညျအားလုံးဖွင့်လို့ထင်စေခြင်းငှါအစဉ်အဆက်ကိုအတူတကွပြန်လာရန်အဘယ်သူမျှမအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ယုံကြည်သို့မဟုတ်မ, ဟောင်းအောင်မြင်မှုပုံပြင်များနှင့်အတူပြန်ရတဲ့ရှိပါတယ်။
အောင်မြင်မှုဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များနှင့်ပြန်လည်ပြန်လည်ပေါင်းသင်းခြင်းသည်အလွန်ရှားပါးသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုပြုလုပ်သူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူတို့ကအမြဲတမ်းမျက်ရည်ကျတာတွေမဖြစ်နိူင်ဘူးဆိုတာသက်သေပြပြီး၊
Angus Thong နှင့်ပြီးပြည့်စုံသော snogging Thong
Jen, 21, ကိန်းဘရစ်
မူလကအတူတူနှစ်နှစ်။ ခြောက်လတက်ခွဲ။ အတူတူပြန်, ယခုအချိန်အထိတစ်နှစ်ခွဲ။
သူက uni မှာနေစဉ်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးကြားဆက်ဆံရေးမှကျူးလွန်ရန်မလိုချင်ခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကနှစ်နှစ်အဆက်မပြတ်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်တစ်ခုတည်း uni သွားအလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
မော်ဂန်, 20, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham
မူလကအတူတူတစ်နှစ်ခွဲ။ သုံးနှစ်အဘို့အခွဲထွက်။ အတူတူပြန်, ယခုအချိန်အထိ, လေးလ။
ငါဝေးရွေ့လျားနေသောကြောင့်အမှုအရာတင်းမာနေတယ်သောအခါငါတို့ပြိုကွဲခြင်းနှင့်နှစ် ဦး စလုံးကနက်ရှိုင်းစွာဆင်းအလုပ်လုပ်မသွား, ဒါမှမဟုတ်ပါကစူပါခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်သိတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ကအလုပ်လုပ်နိုင်လျှင်ကြည့်ဖို့အတူတူနေ၏။
ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာငါပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အခါမလိုအပ်တဲ့အငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကဝေးကွာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမကြိုးစားချင်ကြဘူး။ ဒါကြောင့်ငါတို့နှစ် ဦး လုံးကအဆုံးသတ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်၊ သုံးနှစ်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရှိခဲ့ဘူး။
ဒါပေမယ့်သူကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကကျွန်မရဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူကြိုက်ခဲ့တယ်၊ သုံးနှစ်တာအဆက်အသွယ်မရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါကျည်ဆံကိုကိုက်ပြီးသူ၏နောက် Instagram ကိုကြိုက်ခဲ့သည်။ စုံတွဲတစ်တွဲသည်ဖလှယ်မှုများကဲ့သို့သူသည်ကျွန်ုပ်၏ DM (စာသားကဲ့သို့မြည်သွားခြင်း) သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ (တဖန်ငါမိတ်ဆွေများအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှပြောသည်) နောက်တဖန် chatting စတင်ခဲ့ပြီးဤအချက်အားဖြင့်, ငါအိမ်ပြန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်အမှုအရာလမ်းအလွန်နက်ရှိုင်းတယ်ကြောင့်ပဲခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးနှင့်အတူသွား။ ကျနော်တို့ OK ကိုလုပ်နေလုပ်နေလေးလ။
နာတာလီ, 20, Surrey
မူလကအတူတကွငါးလ။ ၂ နှစ်လောက်ကွဲအောင်လုပ်ပါ။ အတူတူပြန်, ယခုအချိန်အထိ, 10 လ။
ငါနုံဖြစ်သောကြောင့်သူနှင့်အတူရှိနေရန်ကျွန်ုပ်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ငယ်ရွယ်ခဲ့ကြသောကြောင့်သူတစ် ဦး ကြားဆက်ဆံရေးချင်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအလုပ်မလုပ်ဘူး။
ဒါကအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ ငါသူ့ကို Snapchat နှင့်ပစ္စည်းပစ္စယများပေါ်တွင်သိမ်းထားခဲ့ပြီးနောက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုလစဉ်သတင်းစကားများပေးလိုကြောင်း၊
ထို့နောက်သူသည်ငါ၏နံပါတ်တောင်းသည်။ ကျနော်တို့စာသားစပြီးအစည်းအဝေးတက်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်တရားဝင်ပြန်လည်ပြန်လည်စုစည်းရန်ကျွန်တော်တို့ကိုလကြာပါတယ်။ ကျနော်တို့အပြည့်အဝတရားဝင်မဟုတ်သောနှင့် 10 လကြာပါပြီ။
အယ်လာ, 19, Essex
မူလကအတူတူနှစ်နှစ်။ လေးလလောက်ခွဲပါ။ အတူတူပြန်, ယခုအချိန်အထိတစ်နှစ်ခွဲ။
ကျနော်တို့အတော်လေးခဏအတူတကွခဲ့ကြသည်ဒါပေမယ့်ထို့နောက်ငါ့အဖေကွယ်လွန်သွားကျနော်တို့ငြင်းခုံစတင်ခဲ့ပြီးကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးအချင်းချင်းအဘို့အကောင်းမဟုတ်ခဲ့သိတယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့လေးလခွဲ။
ငါသူ့ကိုတစ်ရက်သက်သက်ပဲစာပို့ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသူ့ကိုလွဲချော်ခဲ့လို့ကျွန်မတို့အတော်လေးဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီ၊ ငါသူ့ကိုဘယ်လောက်အထိချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါသိခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့အခြေခံအားဖြင့်တွေ့ဆုံရန်သဘောတူခဲ့ကြပါတယ် & ကျွန်တော်ဘိုးလင်းသွား။ မျိုးပြီးနောက်နောက်တဖန်အတူတူရတယ်!
ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးနည်းနည်းကြီးပြင်း & ငါတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကိုချစ်ဘယ်လောက်သဘောပေါက်ကြောင့်ယခုအလုပ်လုပ်နေသည်ထင်ပါတယ်။ ငါအရင်ကထက်သာ။ ကောင်း၏နှင့်ယခုကျနော်တို့ကယ့်ကိုဒါကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အတူတကွနေထိုင်ကြသည်ပြော deffo ချင်ပါတယ်။
မူလကအတူတူတစ်နှစ်။ တစ်နှစ်တက် Split ။ အတူတူပြန်, ယခုအချိန်အထိ, သုံးနှစ်ကျော်။
ကျွန်မတို့ ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာထွက်စခဲ့ကြပေမဲ့သူကကောင်မလေးမလိုချင်လို့ကွဲသွားတယ် (ငါအရမ်းငယ်လွန်းလို့ငါလုံးဝရခဲ့တယ်!)
ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်သူငယ်ချင်းများအဖြစ်ပြောဆိုခဲ့ကြသော်လည်းဘာမှမထူးတော့သည့်အပြင်နောက်ဆုံးတွင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တစ်ခုခုဖြစ်လာသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးအရွယ်ရောက်သည်။ ဒါဟာအများကြီးပိုကောင်းခံစားရနှင့်ငါတို့တကယ်ပျော်ရွှင်ပါတယ်။
ရာခေလ, 21, စတုတ် -on-Trent
မူလကအတူတူနှစ်နှစ်။ ခြောက်လတက်ခွဲ။ အတူတူပြန်, ယခုအချိန်အထိတစ်နှစ်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူတူနေခဲ့ကြရတယ်၊ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးဟာမတူညီတဲ့ယူနီယံကိုပြောင်းသွားကြပြီးပြောင်းရွှေ့တုန်းကကျွန်မတို့ကြားကဆက်သွယ်မှုဟာအရမ်းဆင်းရဲခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ကသာတကယ်စာပို့သို့မဟုတ် Snapchat မယ်လို့ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တကယ်တော့တော့သင့်လျော်သောစကားပြောဆိုမှုများရှိခြင်းမခံခဲ့ရပါ။
ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးငါတို့ကအပြစ်လွတ်လို့မရဘူးဆိုတာသိပြီးအဲဒီအချိန်ကမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့အိမ်ပြန်လာသောအခါ, ငါတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားသို့ဝင်တိုးလိမ့်မယ်နှင့်အချိန်အလုံအလောက်ပြီးနောက်, ငါတို့နောက်တဖန်ထွက်ဆွဲထားနိုင်သကဲ့သို့အလွန်နာကျင်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ငါတို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်တကယ်လွဲသွားပြီဆိုတာကိုငါတို့သဘောပေါက်လာတယ်။ ကျနော်တို့ uni နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပြီးပိုပြီးအားထုတ်မှုအတွက်ချပြီးနှစ် ဦး စလုံး၏ချိန်ခွင်လျှာကိုရှာဖွေရုန်းကန်ပြီးနောက်ယခုတစ်နှစ်အတူတူပြန်ခဲ့ကြရတယ်။
Yasmeen, 23, လန်ဒန်
မူလကအတူတူခြောက်လ။ သုံးလလောက်ခွဲပါ။ နောက်တဖန်နှစ်နှစ်အတူတူပြန်။
အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်အသက် ၁၇ နှစ်ရှိပြီ၊ သူကကျွန်မရဲ့ရည်းစားခြောက်ယောက်မြောက်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မတို့ခြောက်လကြာအတူတူနေခဲ့ပေမယ့်သူ့အတွက်တကယ်ကျခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်သူကကျွန်တော့်ကိုခွဲခွာခဲ့တယ်။ သူ့ကိုပြန်ရဖို့အလွန်အပူတပြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနှင့်ရပြီ ရှီးဘန်းတစ်ခုလုံးရှုပ်ထွေးပြီးကွဲသွားသည်။
ဒါပေမဲ့အဲဒီနောက်ငါလက်ခံလိုက်တယ်၊ ခရစ်စမတ်နားချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ လူသစ်တွေနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်။ ပါတီတစ်ခုမှာလုံးဝကျပန်းသူ့ကို ၀ င်တိုက်လိုက်တာနဲ့ငါတို့ကထပ်မံနှိပ်စက်လိုက်တယ်။ ဒါဟာလိုက်ဖမ်းဖို့ကောင်းတယ်ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးငါတို့သည်နောက်တဖန်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားတွေ့မြင်ချင်ခဲ့တယ်သိတယ်။
ကျနော်တို့နောက်ထပ်နှစ်နှစ်အတူတူနေခဲ့ကြပေမယ့်ဆက်ဆံရေးကယ့်ကိုအဆုံးဆီသို့ ဦး တည်လမ်းပြသို့သွား။ ငါကပြိုကွဲတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ယခုကောင်းသောအသုံးအနှုန်းများအပေါ်ပါပဲ။ ဒါဟာအားလုံးအဆုံး၌ထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။